जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओमा कति गर्ने आवेदन ? –
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओमा कति गर्ने आवेदन ?
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले असोज ११ गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि प्रथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्दैछ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित दरका ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कूल ३० लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार प्रत्येक आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ताका दरले शेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअनुसार यस कम्पनीको आइपीओ २ लाख ७३ हजार जनाले १० कित्ताका दरले पाउनेछन् । कम्पनीले धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल क्यापिटल रहेको छ।
कति गर्ने त आवेदन ?
धितोपत्र बजारको प्राथमिक निष्काशनमा पछिल्लो समय दिनप्रतिदिन नयाँ लगानीकर्ता थपिने क्रम बढ्दो छ । हरेक नयाँ निष्काशनमा करिब १ लाख संख्यासम्म आवेदक थपिएका छन् । पछिल्ला निष्काशनमा परेको मागका आधार पनि त्यस्तै देखिन्छ । यस आधारमा जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओमा पर्ने आवेदन संख्याले पनि नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने निश्चित प्रायस् छ ।
यसअनुसार यो निष्काशनमा पनि आइपीओमा आवेदन गरेका आधा भन्दा कमले मात्र गोलाप्रथाबाट १० कित्ता पाउनेछन्। बाँकी आधा आवेदकको हात भने यसमा पनि खाली हुनेछ ।पछिल्लो आईपीओ रिलायन्स लाइफमा परेको आवेदलाई आधार मान्ने हो भने करिब ६ लाख ९५ लाख ८९ हजार ४६४ वटा आवेदन परेको थियो । यसअनुसार जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओमा पनि कम्तिमा ६ लाख आवेदन पर्नेछ । ६ लाख वटा संख्यामा आवेदन पर्दा नै १०० जनामध्ये ४५ जनाले मात्र गोलाप्रथाबाट १० कित्ता शेयर पाउनेछन् भने बाँकी ५५ जनाको हात खाली हुनेछ ।
जनरल इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ५ करोड ६ लाख खुद नाफा कमाएको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १७ करोड ३७ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १९ करोड ८० लाख र आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ३० करोड २७ लाख र आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ४१ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यसअनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ चालु आवमा ११५ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १२८, आर्थिक वर्ष २०७९- ८० मा १४८ र आर्थिक वर्ष २०८०- ८१ मा १७४ रुपैयाँ कायम हुने अनुमान छ ।
चालु आवमा आइपीओ जारी गरेर १ अर्ब पूँजी कायम गर्ने कम्पनीले वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी चालु आवबाट क्रमशस् १७- ३८ रुपैयाँ, १९.८१, ३०.२७ र आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पुग्दा ४१-२० रुपैयाँ कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चालु आवमा ५० करोड ६५ लाख खुद प्रिमियम संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०- ८१ मा पुग्दा त्यसलाई १०५ प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब ४ करोड बढी संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै चालु आवमा १ करोड ९२ लाख जगेडा कोष कायम गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८०- ८१ मा त्यसलाई बढाएर ११ करोड पुर्याउने सोच रहेको छ ।
« मान्छे खाने बाघ चितवन निकुञ्जको नियन्त्रणमा, डार्ट गरेर खोरमा राखियो
चीनले हजारौँ मानिसहरुलाई दियो संक्रमणको खोप »